Sawiro: Soomaaliya oo 34 sano kadib soo ceshatay xuquuqda codeynta ee urur caalami ah. – Xeernews24
Sawiro: Soomaaliya oo 34 sano kadib soo ceshatay xuquuqda codeynta ee urur caalami ah.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknooloojiyada ayaa ka qeybgalaya shir-weynaha Ururka Isgaadhsiinta Caalamiga ah (ITU) oo 9-kii Sebteembar ka furmay caasimadda dalka Argentina ee Buenos Aires, ka dib markii wasaaraddu ku guuleysatay inay dib u soo ceshato xubinnimada buuxda ee ururkaas oo maqneyd tan iyo 1983-dii, kolkaas oo ay joogsatay bixinta qaadhaanka sanadlaha ah.
Qaadhaanka lagu yeeshay Wasaaradda muddadaas wuxuu gaadhayay in ku dhow 2 milyan iyo badh, taas oo sababtay in wixii markaas ka dambeeyay ay Wasaaraddu si kor-joogto ah kaga qeybgasho shirarka, iyada oo aan lahayn wax cod ah.
Hase yeeshee, dadaal ay mas’uuliyiinta Wasaaraddu bixiyeen bilihii u dambeeyay waxaa lagu guuleystay in Soomaaliya laga cafiyo lacag ku dhow 1 milyan iyo badh doolar, waxaana la dajiyay qorshe soconaya muddo sanado ah oo lagu bixinayo baaqiga, iyadoo qeybtii 1aad oo dhan in ku dhow 80 kun doolar ay Wasaaraddu bixisay dhammaadka bishii hore.
Wasiir Cabdi Cashuur oo ka hadlayay shirkaas ayaa sheegay in xubinnimada ITU ay Wasaaradda ka caawin doonto sidii ay dib ugu heli lahayd adeegyada ay wasaaradaha dalalka caalamku ay ku leeyihiin ururkaas. Wuxuu sidoo kale sheegay in tallaabadani ay fududeyn doonto sidii ITU ay dalka Soomaaliya uga kaalmeyn lahayd dhismaha kaabayaasha isgaadhsiinta dalka oo aysan shirkaduhu si gooni gooni ah u maalgashan karin.
“Sharaf bay noo tahay inaan dib u soo ceshanay xubinnimada buuxda ee ITU-da. Ma dooneyno inaan korjoogto kaliya ka noqono ururka ITU-da oo hawlo badan ay nooga xidhan yihiin, inagoo awoodna inaan cod yeelano. Waxaan u mahadcelinayaa Ra’iisul Wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa iyo shirkadaha isgaadhsiinta iyo internetka Soomaaliya oo Wasaaradda ka caawiyay inay qaadhaankaas bixiso, iyadoo nidaamka lagu bixinayo uu ahaa mid daahfuran,” ayuu Wasiirku intaasi raaciyay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/w1.jpg 637 1024 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-12 12:58:502017-10-12 12:58:50Sawiro: Soomaaliya oo 34 sano kadib soo ceshatay xuquuqda codeynta ee urur caalami ah.
Imaaraadka Carabta oo wada qorsho milateri oo lagu qabsanayo Soomaalia. Wax garadka Beesha Ciise iyo maamulka magaalada Dire -Dhebe oo ku hawlan sugida...